Satria ny antsika Tela vidin'ny ESLdia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa, tsy avelanay ao amin'ny tranonkalantsika ny fampahalalana rehetra momba ny vokatra mba tsy hadika. Azafady, mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny varotra ataonay, dia halefan'izy ireo aminao ny antsipiriany momba izany
Ahoana ny fiasan'ny tag ESL?
A feno Tag ESL ny rafitra dia misy ampahany efatra: ny solosaina PC, efijery EPD, Tag ESL ary fitaovana terminal finday marani-tsaina.
Tag ESL Voalohany, ny mombamomba ny entana ao anaty tahiry dia voahodidin'ny solo-sainan'ny mpampiantrano amin'ny alàlan'ny Tag ESLrindrambaiko fampiharana, ary avy eo ny vidiny sy ny fampahalalana hafa mila havaozina dia ampitaina amin'ny exciter amin'ny alàlan'ny Ethernet (na seranana serasera serial); ny exciter dia mitondra ny antena tadiavina mba hampidirana ny famantarana radio RF miaraka amin'ny mombamomba ny angon-drakitra vokatra dia alefa any amin'ny magazay iray manontolo.
ny Tag ESL ny rafitra dia manana asa fifandraisana roa: point-to-point sy ny fandefasana vondrona, izany hoe: ny solosaina mpampiantrano dia afaka mandefa angona amin'ny voatondro Tag ESL, na izy rehetra Tags ESL miaraka amin'izay Raiso ny fifehezana. Tag ESL anampiditra tamim-pahombiazana ny talantalana tamin'ny programa solosaina, nanala ny toe-javatra nanova ny vidin'ny tanana, ary nahatratra ny tsy fitovizan'ny vidin-javatra teo amin'ny fisoratana anarana sy ny talantalana.
tsirairay Tag ESL mitahiry fampahalalana marobe momba ny vokatra mifanaraka amin'izany, ary ny mpivarotra dia afaka manamarina sy manamarina mora foana amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny fitaovana finday marani-tsaina.
Fa maninona no mifidy ny vidin'ny ESL?
1. Tela vidin'ny ESL tena azo atokisana
Operation automatique d'exploitation, fanaraha-maso mandeha ho azy ary mekanika fampitandremana mialoha, fampisehoana taratasy elektronika tena tsara, fampitana data voaangona, fiainana bateria mihoatra ny 5 taona
2.Tela vidin'ny ESL tena mety
Fiovan'ny vidin-tsindry iray monja, fanavaozana ny rindranasa lavitra rafitra, mekanisma fihodinana robina ESL mandeha ho azy, famerenana mandeha ho azy aorian'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra, fametrahana tsotra ary fandidiana mora
3. Tela vidin'ny ESL fandidiana malefaka
Tohano ny fiovan'ny efijery marobe, ny mari-pamantarana manokana momba ny vidin'ny marika manokana, mifanena amina tontolon'ny fiteny maro, mifanaraka amin'ny sehatra terminal maro, kojakoja manankarena, ampifanaraho amin'ny scenario maro
Amin'ny fampiharana azo ampiharina: Tela vidin'ny ESLmitana ny andraikitry ny mpampita vaovao sy ny mpamatsy fifandraisana ao amin'ny magazay, mifandray amin'ny mpanjifa, mpanampy amin'ny fivarotana ary ny foibe amin'ny lafiny maro hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa, hanatsara ny fivezivezena ary hahatsapa ny fitantanana sy ny fitantanana fikojakojana. Ny fivarotana dia afaka mifandray amin'ny Internet sy ivelan'ny InternetTela vidin'ny ESL, ahafahan'ny magazay ara-batana mamokatra, manangona, mamakafaka ary mampandeha ny angona momba ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa, ary manome loharanom-pahalalana ho an'ireo mpivarotra mba hahatratra ny varotra mazava kokoa. Raha ampitahaina amin'ny fomba marketing nentim-paharazana toy ny fisarahana amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet, ny fomba tokana, ny fifandraisana mitokana, ny loharanom-pahalalana tsy mazava, ary ny fahasarotana amin'ny fitadiavana ny vokatra farany amin'ny varotra, ny marketing marina dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiharana mitambatra amin'ny efijery fisoloana syTela vidin'ny ESL. Ary ny fizotrany rehetra dia arahana, fanaraha-maso ny fotoana tena izy, mba hampitomboana ny vokatra ara-barotra.
Size 45mm (V) * 89mm (H) * 13.5mm (D)
Loko mampiseho Mainty, fotsy, mavo
vahaolana 296 (H) × 128 (V)
miseho Teny / Sary
Mari-pana miasa 0 ~ 50
Temperatura fitehirizana -10 ~ 60 ℃
Fiainana bateria 5 taona
Manana maro isika Tags ny vidin'ny ESL ho anao hisafidy dia misy foana izay mety aminao! Azonao atao izao ny mamela ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny boaty fifanakalozan-kevitra eo amin'ny zoro ambany ankavanana, ary hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora.
Sarimihetsika vidin'ny MRB ESL HL290 horonan-tsary
Teo aloha: Tabilao elektronika MRB HL213F ho an'ny sakafo mangatsiaka
Manaraka: MRB e vidin'ny ranomainty HL420
E Vidin'ny vidin'ny ranomainty